Bodista Manontany Ireo Bodista Henjam-pihetsika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2013 9:23 GMT
Maro amin'ireo Sinhla Buddhists no mijoro manohitra ilay herisetra vao haingana teo natao tamin'ireo Silamo sy ny fivavahana hafa, ary ireo lahateny feno fankahalana nataon'ny Bodu Bala Sena (hery Bouddhiste), fikambanana iray Sinhala-Buddhist mahery fihetsika miorina ao Colombo (Sri Lanka).
Raha mbola tsy nanomboka akory ny fiaretan-tory mitondra labozia tao amin'ny Arabe Havelock tao Colombo ny harivan'ny 12 Aprly 2013, hanoherana ny fankahalàna sy tsy fandeferana dia nifanehatra tamin'ny fanoherana nataon'ireo mpitandro filaminana sy ireo mpikambana ao amin'ny Bodu Bla Sena. Andianà polisy sy vondrona polisy mpandrava korontana no tonga teo an-toerana. Nanomboka niampanga ireo mpikarakara ny fiaretan-tory ho nanova ny hiram-pirenena ireo mpikambana avy amin'ny Bodu Bla Sena ary mangataka ny hisamborana azy ireo sady nampiseho ny takela-taratasin-kira natao hovakiana nandritra ny fiaretan-tory. Nisambotra olona dimy mpandray anjara tamin'ilay fiaretan-tory ny mpitandro filaminana ary nanaparitaka ireo vahoaka izay niverina nitangorona teo amin'ny araben'i Gower. Navoaka ireo olona voasambotra ireo fotoana vitsy taty aoriana.
Ny maha-ara-drariny ny Bodu Bala Sena (BBS)
Ny Bodu Bala Sena izay noforonin'ireo Moana henjam-pihetsika, Kirama Wimalajothi sy Galagoda Aththe Gnanasara, dia niteraka resabe hatramin'ny niforonany tamin'ny 7 may 2012. Maro amin'ireo asa nataony no fihantsiana ny olon'ireo karazam-pinoana hafa.
Nandritra ny fihaonambe tany Maharagama, Colombo, ny 17 febroary 2013, Galagoda Aththe Gnanasara, sekretera generalin'i BBS, dia nilaza fa “governemanta noforonin'ireo bodista Sinhala io, ary tsy maintsy mijanona ho bodista Sinhala. Firenena Sinhala ity, Sinhala ny governemantany. Mamono ny foko Sinhala Ireo soatoavina demokratika sy marolafy.” Nolazainy tamin'ireo olona tao amin'ilay famoriam-bahoaka ihany koa fa “tsy maintsy miova hanjary ho herin'ny mpitandro filaminana sivily miafina ry zareo mba hiady amin'ny silamo mahery fihetsika. Ireo lazaina fa demokraty dia andalam-pamotehana ny foko Sinhala”.
Ny febroary 2013, Kirama Wimalajothi, mpitarika ny BBS, dia niantso fandraràna ny burqa ao amin'ny firenena. Nanao famoriam-bahoaka nidadasika be ry zareo nandritra ny Febroary 2013 hitakiana ny handravàna ny rafitra Silamo halal izay nanery ireo mpitari-pivavahana Silamo handao ny fomba fametahana mari-pamantarana ny vokatra Halal (jereo ny tatitry ny Global Voices).
Fiaretan-tory mitondra labozia
Tsy ela akory izay ny vondrona Facebook antsoina hoe “mametram-panontaniana amin'ny Bodu Bala Sena ny bodista” dia nilaza fiaretan-tory mitondra labozia manakambana ny foko rehetra sy ny firehana ara-pinoana mba hampahatsiahy am-pahatoniana amin'ireo Moana bodista ny hafatr'i Bouddha izay mitory ny “tsy hanaovana herisetra”.
Mivaky toy izao ilay fanambaràna :
FIARETAN-TORY MBA HIAROVANA NY DHAMMA: amin'ny 7 ora hariva, zoma 12 aprily. Manoloana ny fihaonan-dàlana Sri Sambuddhathwa Jayanthi Mandriraya Thummulla eo amin'ny No. 32, làlana Havelock Colombo 05. Valio “tiako” raha mieritreritra ny ho avy ianao. Mitondrà labozia ho zaraina. Hanandratra vavaka malefaka momba ny marina isika.
Fanasàna ho amin'ilay fiaretan-tory mitondra labozia. Sary natolotry ny pejy Facebook-n'ny Questioning Bodu Bala Sena
“Tsara kokoa ny mitondra labozia noho ny miantso tody […]”Ito ny FFM (Fametrahana Fanontaniana ho an'ny Maro) nomanina ho an'ilay fiaretan-tory, navoaka tao amin'ilay pejy Facebook.
Manoratra mikasika ireo mpandray anjara ny blaogera Abdul Halik ao amin'ny Going Globa :
Maro karazana ireo mpandray anjara : ireo mpampianatra, ireo artista, ireo mpiasa mpampita vaovao, ny fiaraha-monin'ny olon-tsotra, ireo vondron'orinasa, ireo manam-pahaizana ary raha tsorina koa dia ireo tanora voakasiky ny toe-draharaha.
Manontany ilay mpiblaogy:
Ahoana no ataonao mba hanetsehana “ny hafa” handray anjara? ahoana no ataonao hamadihana ny hetsika ho fihetseham-bahoaka ?
Ilay mpanao gazety sady blaogera Meg dia manontany mikasika ny fihetsiky ny mpitandro filaminana izay tsy niditra an-tsehatra fa nanome vàhana ny mpikambana ao amin'ny BBS niezaka nandrava ny fiaretan-tory. Nanazava ny antony izy :
Raha ny marina, ny taratasy vita printy notazonin'ireo mpandray anjara nandritra ny fiaretan-tory dia tsy ny tonony vaova ho an'ny hiram-pirenena fa vavaka bodista izay saika ho vakiana mandritra ny fiaretan-tory.
Nandefa sary vitsivitsy avy amin'ny fihetsiketsehana izy.
Nanao tatitra voalohany mikasika ny fiaretan-tory ny mpanao gazety Malinda Seneviratne. Ito ny tafatafa nifanaovana tamin'i Jake Orlof, izay nandray anjara tamin'ilay fiaretan-tory mitondra labozia:
Niresaka i Ramishka Dasanayaka (@ramishkad), blaogera avy amin'ny Kandy :
@ramishkad (Ramishka Dasanayaka): nandrava ny fihetsiketsehana manohitra ny fankahalana izany ny Bodu Bala Sena. Ankehitriny aho dia manomboka manontany tena raha misy fahasamihafana eo amin'ny (LTTE) Tigres Tamouls, ireo Talibans sy ny BBS
Nibitsika ny mpanao gazety zokiolona D.B.S. Jeyaraj (@dbsjeyaraj) hoe :
@dbsjeyaraj (D.B.S.JEYARAJ): Vavolombelona iray nahita maso mikasika ny fomba nanakanan'ny mpitandro filaminana ilay fiaretan-tory milamina nitondra labozia teo anoloan'ny foiben-toeran'ny Bodu Bala Sena http://t.co/0YexuQzmMG
Manana fanantenana ilay bilaogera Kath Noble :
Nanampy tsy nahy an'i Sri Lanka ireo Moana-n'i Bodu Bala Sena. Tena ambany ny kabariny ary kitoatoa ny asany ka niteraka valin-kafatra henjana – feno tsikera momba ny fampielezan-kevitr'izy ireo manohitra ny Silamo ny vaovao, ny ankamaroan'ireo tsikera dia avy amin'ireo bodista Sinhala ihany.
Silamo sri lankais miaraka manangana takela-taratasy nandritra ny hetsika fanoherana taorian'ny fivoahana avy nivavaka isaky ny zoma teo ivelan'ny moske tao Colombo, Sri Lanka. Sarin'i Colombo Wire. Copyright Demotix. Zoma 22 Martsa 2013
Subha Wijesiriwardena, mpandihy sady blaogera manoratra hoe :
Ny Bodu Bala Sena, ny Ravaya Sinhala sy ireo vondrona miralenta hafa dia manana fandaharam-potoana mazava – resin'ny Tamouls isika, noho izany ‘ndeha ataontsika fahavalo vaovao ny silamo. Mitfanaraka amin'ny fandaharanasan'ny governemantantsika amin'izao fotoana ihany izany, izay raha ny marina dia vizan'ny ady an-trano ry zareo ka manontany tena ny amin'ny fomba atao hampivanàka, hampatoriana am-pitsanganana ny vahoaka – ny tahotra ny fahavalo iraisana izay indrindra no tena kendreny anaova azy io.
Manontany izy :
Voasoritra ny tsipiky ny ady. Haingana be hatrany ireo fondamantalista fatra-pifikitra amin'izay voasoratra raha haka toerana. Ary ianao, aiza no misy anao ?
Tsy ela akory izao, ny Sunday Leader dia nitatitra fa ny governemanta dia mihevitra ny handràra vodrona mahery fihetsika maromaro, isan'ireny ny Bodu Bala Sena.